Yeman: Cudurka Daacuunka Oo Dilay 1100 Oo Qof – Goobjoog News
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in ay korortay tirada uu soo ridanayo cudurka Daacuunka ee dalka Yeman.
Hay’adda WHO ayaa ku sheegtay tiro koob ay sameysay in ku dhawaad 159 kun oo qof looga shaki qabo in ay qabaan cudurka dilaaga ah ee Cholera, kuwaas oo ku sugan gudaha Yeman, iyada oo tilmaantay 1100 oo qof ay u dhinteen cudurkaan.
Hay’adda ayaa shalay waxaa ay sheegtay oo kale in ay diiwaan galisay 1054 qof oo dhimatay inta uu socday Choleraha, waxaa ay intaas ku dartay in ka badan 155 kun oo qof kuna sugan Yeman in ay qabaan cudurkaan.
Dalka Yeman waxaa maalin walba u geeriyooda cudurka Cholera in ka badan 30 qof hay’adda WHO ayaa waxay ka digeysaa in ay suurto gal ay tahay in dadka u dhimanaya cudurkaan ay gaaraan maalin walba kumanaan qof.
Cudurka Cholera ayaa waxa uu ku faafay Yeman October 2016 kii, isaga oo kordhay bishii December ee isla sanadkaas.
Baxreyn: Qarax Lala Eegtay Meel Ay Ku Suganaayeen Ciidamada Ammaanka Dalkaasi